Wareysi: Madaxweynaha Gaas, booqashadiisa Qandalla,isla-xisaabtanka golaha xukuumadda iyo sababta loo qaban waayay sanad-guurada waqtiga uu guuleystay | RBC Radio
Wareysi: Madaxweynaha Gaas, booqashadiisa Qandalla,isla-xisaabtanka golaha xukuumadda iyo sababta loo qaban waayay sanad-guurada waqtiga uu guuleystay
Gaalkacyo (RBC Radio) Madaxweynaha Puntland,Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqashadii ugu horreeysay ku tagay degmada Qanadala ee gobolka Bari ayaa ka warbixiyay nolashada iyo xaaladda deegaanka ka jirta.
Cabdiweli oo wareysi siiyay idaacadda Daljir,waxaa kalo uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid-yihiin sanadkan sababta aan loo qaban kulankii is-la xisaabtanta hay’adaha dowladda oo sanad walba dhammadkiisa la qaban jiray iyo waxyaabaha uu u baajiyay munaasabaddii loogu dabal-degi jiray muddada uu xilka hayay.
Madaxweynaha Cabdiweli ayaa ugu horreeyn sheegay booqashada uu ku tagay Qandala inay la xiriirto sidii ay dowladda ugu korgali lahayd xaaladda degmada iyo nolashada ay ku nool-yihiin bulshada.
Wuxuu sheegay inta uu ku sugnaa degmada Qandala inuu kormeer ku kala bixiyay gudaha degmada,isagoo marka caddeeyay in dhibaato farabadan ay ugu tageen Qandala kooxda Daacish ee dhawaan isaga baxday.
Madaxweynaha wuxuu sheegay muddada ay kooxda Daacish ku sugnaayen degmada inay bur buriyeen goobaha u adeegayay bulshada iyo dowladda,wuxuuna marka soo hadal-qaaday xarunta caafimaadka uu sheegay bur bur xooggan inuu gaaray.
“Waxaa soo maray xaruntii caafimaadka ee degmada, iyadoo ay bur-buriyeen talaagadii lagu keydinayey daawada, waxa ay bili liqeysteen saldhigii booliska oo waxa ay kala baxeen albaabadii, soolarkii sarnaa oo la dhaceen xabado, nimankiisana,”ayuu yiri madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha wuxuu caddeeyay dowladda inay si dhaqso ah wax uga qabaneyso xaaladda ka jirta degmada Qandala,dhammaana dib loo soo celin doono adegyada bulsho iyo kuwa dowliga ah ee degmada ka jiray.
Gaas wuxuu sheegay in degmada Qandala la dejin doono ciidamo ka tiran Puntland si ay u sugaan amniga magaalada,wuxuuna marka sheegay fursad dambe inan loo siin doonin Daacish inay gudaha ugu soo galaan degmada.
Docda kale,waxaa madaxweynaha la su’aalay sababta aan sanadkan loo qaban munaasabadihii loogu dabaal-degi jiray guushii uu ka gaaray doorashadii uu ku soo baxay ee sanadkii 2014,wuxuu sheegay dalka inay ka jiraan abaaro oo bulsho badan oo reer Puntland ah la daala-dhacayaan.
‘Waan ka xishoonay in la qabto munaasabadaha,dalka abaaro ayaa ka jira oo bulshada ay dhibaato ka soo gaartay,dhibka ayaan dooneyna inan la qaybsano,”ayuu yiri Cabdiweli.
Madaxweynaha wuxuu sheegay marka uu ku laabto Garoowe inuu jeedin doono khudbada sanad laha ahayd,isagoo ku soo qaadi doona arrimo badan oo u ku sheegay inay qayb ka noqon doonto doorashooyinka dalka ka socda.
Cabdiweli Gaas,waxaa kalo la waydiiyay sanadkan sababta aysan u dhicin kulamadii isla xisaabtanka ee golayaasha dowladda,wuxuu sheegay inan la baajin oo dhawaan hay’adaha dowladda lala xisaabtami doono.
Madaxweyne Gaas,waxaa lugu tilmaamay booqashada uu ku tagay Qandala madaxweynihii ugu horreeyay ee Puntland ka socda ee degmada taarikhiga ah booqda.
Hoos ka dhageyso wareysiga madaxweynaha